AH Metal mitsipitsipika Slurry Pump - China JP Metal & Equipment
Fampidirana Type AH, HH, M paompy dia cantilevered, marindrano, centrifugal slurry paompy. Izy ireo dia natao noho ny manazava Marokoroko sy manimba tsikelikely slurry ao amin'ny metallurgical, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, arintany, hery, fananganana indostria ara-nofo sy ny sampan-draharaha sns AH (R), HH no antsoina koa hoe paompy slurry adidy mavesatra, dia ampiasaina mba hitondrana ny mahery avo Marokoroko sy hakitroky na ny ambany ambony lohany hakitroky slurry. Teo ambany tsindry allowable, ny karazana paompy ity ihany koa dia afaka hapetraka amin'ny multistage andian-dahatsoratra. HH Pu karazana ...
Supply fahaiza: 5000 Pieces isan-taona
Fandoavam-bola Term :: L / C, T / T, D / P, Western Union, Money gram
Taratasy fanamarinana: ISO9001, SGS, AK
Soraty AH, HH, M paompy dia cantilevered, marindrano, centrifugal slurry paompy. Izy ireo dia natao noho ny manazava Marokoroko sy manimba tsikelikely slurry ao amin'ny metallurgical, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, arintany, hery, fanorenana indostria ara-nofo sy ny departemanta etc.
AH (R), HH no antsoina koa hoe paompy slurry adidy mavesatra, dia ampiasaina mba hitondrana ny mahery hakitroky Marokoroko sy ambony na ambany hakitroky slurry ambony lohany. Teo ambany tsindry allowable, ny karazana paompy ity ihany koa dia afaka hapetraka amin'ny multistage andian-dahatsoratra. HH karazana paompy no tena ampiasaina amin'ny fitaterana ambony ambany hakitroky hakitroky avo loha na ambany slurry Marokoroko sy ambony lohany.
M (R) dia karazana adidy afovoany slurry paompy, dia ampiasaina mba hitondrana ny tsara sombiny habeny sy afovoany hakitroky slurry.
Ny Liner sy ny impeller ny AH (R) sy M (R) miovaova dia afaka ny ho modely sy ny fitaovana na mety ho anti-Marokoroko sy metaly na fingotra, fa ara-nofo ny Liner sy impeller ny HH modely ihany no mety ho dikan-vy. Fingotra lena faritra ara-nofo no tena ampiasaina amin'ny fitaterana ny slurry izay misy tsara, tsy maranitra sombiny haben'ny.
Ny lavaka tombo-kase ho an'ny karazana AH (R), M (R) sy HH paompy dia afaka ny ho adoptable ny fihary tombo-kase, expeller tombo-kase tombo-kase sy ny mekanika. Ny marary mitsika dia azo napetraka ao amin'ny Nifanalavitra be ny 45 degre amin'ny fangatahana sy ny miompana akory va valo toerana mba hifanaraka fametrahana sy ny fampiharana.
1. sampana marary mitsika dia azo napetraka ao amin'ny Nifanalavitra be ny 45 mari-pahaizana.
2. Tsara replaceability ny singa amin'ny paompy tany am-boalohany.
3. Wear-mahatohitra vy sy ny asa fanompoana amin'ny fiainana ny fotoana ela.
4. Amin'ny axial lehibe kokoa sy radiala afaka entana ampy,
5. marary mitsika tari-dalana azo nametraka amin'ny Nifanalavitra be ny 45 degre toy ny fangatahana, ary miompana akory va valo toerana mba hifanaraka fampiharana.
6. Suit toe-miasa hafa.
7. Wide fampiharana, avo fahombiazana sy mora foana.
8. Wide safidy ho an'ny impeller.
9. mitondra fampiasana menaka lubrication fivoriambe.
Selection Chart sy ny Performance
paompy Model Allowable Max. Power
fahafahana Q Head
1. fahaiza soso-kevitra isan-karazany: 50% Q'≤Q≤110% Q '(Q' Mety ve ny fahaizana ambony indrindra fahombiazana amin'ny fotoana).
2. NPSH: mety ny milaza Q kevitra amin'ny hafainganam-pandeha ambony indrindra
Ny AH karazana paompy slurry paompy manana vatana izay ahitana ny replaceable anaovan'ireo-mahatohitra vy liners na mitafy-mahatohitra liners fingotra, ary koa mampihatra impellers anaovan'ireo-mahatohitra fitaovana vy, na mitafy-mahatohitra fingotra fitaovana. Ny HH slurry karazana paompy ihany no mampihatra anaovan'ireo-mahatohitra fitaovana vy toy ny paompy sy ny impellers vatany.
AH andian-dahatsoratra dia be slurry paompy ampiasaina amin'ny mpampatsiro hanina, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, fanodinana mineraly, asa fanadiovana y, dewatering, fikarakarana ny rano, arintany fanasana, fikosoham-bary, rivo-doza fahana, tailing, fahefana, sns ... fitaovana fanorenana. indostria isan-karazany toerana. Ny paompy anarana hafa dia antsoina hoe asa ho an'ny hafa andraikitra: Mineraly fanodinana paompy, Mill marary mitsika slurry Pump, Booster paompy, Famahanana paompy, Tailing paompy, Transfer paompy Thickner Underflow Pump, De-manondraka efijery paompy, Pressure paompy Miezaha paompy ...